#biometrique | GAZETY_ADALADALA
PRESIDENCE & CIM Ambohidahy : Hafatra ho anareo rehetra ao tsy misy ankanavaka
Posted on 04/12/2015 by gazetyavylavitra
Tsy dia mahagaga ahy loatra raha hatramin’ny mpamily aza mihevitra ny tenany ho filoham-panjakana rehefa eny an’arabe, ka mahavita hadalàna, hatramin’izay fahadisona mahafaty aza
Tao amin’ny #CIM #Ambohidahy izahay androany hikarakara ny fanoloana ny fahazoandàlana taloha ho #biometrique. Mbola tsy fisokafan’ny birao dia efa teo satria mba te-ho afaka aloha. Olona folo raha be indrindra no teo alohan’ny tena.
Rehefa tafiditra. Ela ny fandraisan’ingahy mpandray teo amin’ny Guichett N°1 ny olona iray. Nanomboka niainga ny fanehoankevitry ny mpilahatra tety an-jorony hoe:
« Fa angaha tsy efa resaka solosaina no miasa no mbola milona be? »
Izay fahelàna izay eo ihany, fa ny tena vao mainka nampisondrotra ny olona dia ity: Nantsointsoina nanerana ny efitrano raha toa ka misy aminay mpilahatra no avy amin’ny Présidence. Niala avy any ny olona 5 voalaza fa avy amin’ny #présidence. Dia hoe tsy miantsy mandeha alohan’ny olona rehetra fa maika hiverina birao
Hoy ny olona hoe:
Fa izahay izany angamba tsy misy fotony daholo ary tsy manana anton’asa sy birao hovonjena ve?.
Dia noleferina fa hoe mba 5 fotsiny ireo ka aleo ary handeha e!
Fa talohan’ny handraisana azy ireo dia nifampiresaka kosa aloha ireo olon-tsotra nilahatra sy ry zareo 5 vao tonga ireo. Hoy ireo mpilahatra’ara-dalàna’ hoe:
Tsy mampaninona anay ny handefa anareo, fa kosa aleo hifandimby.
Tsy sarotiny ireo olona 5 voalohany ireo, fa nanaiky no sady nisaotra aza.
Mahagaga fa ingahy mpandray teo amin’ny Guichet N°1 indray no nisolelaka hoe, tsy maintsy halefa daholo aloha ry zareo fa bedin’ny Chef ao aminy, hono, izy. Ary dia tsy navelàny raha tsy vita ny 4 voalohany. Na dia nomena fanazavana aza izy fa efa nifandamina ny vahoaka madinika fa hatao mifandimby.
Tsy nijanona teo ny tantara. Fony mbola ny olontsotra no noraisiny, dia elabe vao vita ny olona iray. Nony ireto avy amin’ny « tompon’ny kadasitr’i Madagasikara » no noraisina, dimy minitra raha ela indrindra dia vita ny dossier iray. Mbola tsy vita fa mitohy ihany. Tsy mbola voahilika akory ny 2 ambiny tamin’ireo 5 voalohany dia efa nisy andiany 5 hafa indray – mbola avy amin’ny « tompony » ihany, niampy 5 hafa in-2.
Fa ny nampalahelo dia tsy mba nipitrapitra mampalahelo mba hanao izay hangorahana sy handefasan’ny olona azy ny sasany tamin’ireto « tompony » ireto, fa vao mainka niridiridy sy nidiridiry nanome fo, na tamin’ny fiteny, na tamin’ny fihetsika. Marina fa nisy avy taty aminay olon-tsotra ny fiakàrana afo nateraky ny zava-nitranga, fa tsy izy ireo mihitsy no ndeha hampianatra anay ny fahaizana miaina sy fahalalam-pomba.
Nampahatsiahivina nandritra io fotoana io ny fihetsiky ny filoha Obama raha nandalo ireny toerana fanamarinana ny mombamomba ny tena sy fisavàna karapanondro ireny izy. Voamariky ny mpitandro filaminana iray fa anisan’ireo nilahatra ny filoha Obama ka saiky halefany nialoha ny rehetra. Izy tenany mihitsy no tsy nanaiky, fa hoe « aleo aho hanaraka ny fandaharana toy ny olona rehetra, savaina sy hamarinina toy ny olona rehetra ». Ilay mpitandro filaminana indray no menamenatra nanoloana izany hafatra nampitainy izany. Fa tsy toy izany ny Malagasy nahazo fahefana, na ireo Malagasy mahazo fofonkeliky ny mpitondra fanjakàna, sy mba nahatahiry kely ny vovoka avy eny Iavoloha.
Mba rahoviana re ny eto amin’ity Madagasikara-ntsika ity no hiova e. Hoy mantsy ny valintenin’ilay madama (izay tsy hotononiko eto ny anarany) raha namaly an’io fanamarihana io:
« Tsy hainao angaha fa eto Madagasikara anie isika e…I don’t hear anything »….
Nahazo ny hafatra tsara koa fa tsy izy irery no mahafehy ny teny vahiny. Mba hahazoan’ireo rehetra manodidina ny adihevitra, raha hendry, dia amin’ny teny Malagasy no mifampiresaka, araka ny voalazany rahateo hoe ‘eto Madagasikara’ isika. Sady nihebohebo ery ikala maivan-doha.
Nivoaka tao mihitsy aza ny hatezeran’ny sasany hoe:
« Aza mba hitanay manao hadisoana eny an’arabe eny, fa dia hataonay fitsaram-bahoaka ».
Dia sanatria ve izany no andrasana hitranga vao hihevitra hanova famindra? Jereo ihany izy tokony hilaminana ry zareo a!
Tsetsatsetsa tsy aritra: TEHAKA be kosa aloha ho anareo tao amin’ny #CIM tao amin’ny 202 fa nisy Shinoa tratra nitondra fahazoandàlana sandoka tao e! Ataovy mahafantatra tsara mihitsy fa tsy toy ny y any ny aty. Laharna amin’ny anaran’olona hafa no netiny tao, nefa dia tsara tarehy sy toy ny vaovao ery anie izany izy eeee!
Filed under: Non classé | Tagged: #biometrique, #CIM, #Permis, #Présidence, Ambohidahy, Antananarivo, Centre immatriculateur |	Leave a comment »